Ku Dhawaad 115 Askari Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Weeraro Ka Kala Dhacay Konfurta Iyo Galbeedka Afghansitan – Bogga Calamada.com
Ku Dhawaad 115 Askari Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Weeraro Ka Kala Dhacay Konfurta Iyo Galbeedka Afghansitan
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan waxey sheegayaan in gobalo ka tirsan dalkaasi ay ka dhaceen dagaallo culus oo u dhaxeeya ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul.
Weeraradan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen ku dhawaad 115 askari oo ay ku jiraan saraakiil sar sare oo ka tirsan maamulka Ridada Kaabul waxey sigaar ah uga kala dhaceen deegaano ka kala tirsan Wilaayaatka Farah iyo Helmand ee dalkaasi.
War rasmi ah oo kasoo baxay Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa lagu xaqiijiyay in dagaalka dhacay qeybo ka mid ah gobalka Farah ee Galbeedka Dalka Afghanistan uu socday muddo Labo iy Toban Maalmood oo xiriir ah dhimasho iyo dhaawacna ay ku noqdeen ugu yaraan 81 askari oo ah maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Kaabul.
Sidoo kale dagaalkaasi waxaa lagu burburiyay Sagaal gaari oo ah noocyada kala duwan ee dagaalka waxeyna sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta nolasha ku qabteen Labo askari oo ka tirsan Murtadiinta Afghanistan,iyagoona dhanka kale qaniimeystay hub fara badan.
Dhanka kale dagaal culus oo ciidamada Mujaahidiinta iyo kuwa Ridada Kaabul ku dhexmaray degmada Nawah ee wilaayada Helmand ee Konfurta dalka Afghanistan waxaa maamulka Ridada Kaabul looga dilay 15 askari waxaana looga dhaawacay 16 askari mid ka mid ah gaadiidka Gaashaaman ee maamulka Mareykanka uu ka dhistay Kaabul waxaa lagu gubay dagaalkaasi.
Dagaaladan ayaa kusoo aadaya xilli maalmo ka hor Camaliyaad Istish-haadiyo ah oo ka kala dhacay Kaabul iyo Qandahaar lagu dilay Tobaneeyo askari oo ah kuwa Saliibiyiinta Mareykanka.